Amaphupho ngezilwane zasendle – iAfrika
Uma uphupha ingwenya kusuke kuzokwenzeka into embi, kokunye ukuphupha ingwenya kusho isifo, umshophi noma umonakalo ozokwenzeka. Kubangcono uma kuwukuthi ekuyiphupheni kwakho ayikulumanga, ngoba lokho kusho ukuthi noma ungavelelwa umshophi kodwa umonakalo ngeke ube mkhulu ngaleyondlela noma wona uzoba khona.
Uma uphupha ubona inhlanzi kusho ukuthi uzoba nempumelelo emsebenzini nasempilweni. Ukuphupha udoba inhlanzi wayibamba uyoba nenhlanhla. Uma iphunyuka uyolahlekelwa yizo zonke izinto ezisemqoka kuwe.
Uma uphupha ukuthi ubamba umbokwane kusho ukuthi uzoba nomshado omuhle. Uma uwuphunyula umbokwane ngemva kokuba ubusuwubambile kodwa kusho ukuthi uzobhekana nokwehlulwa kungekudala.
Tags Izinhlanzi, Ombokwane
Uma uphupha ubona amagundane kusho ukuthi kunenkinga eza ngakuwena. Abanye abantu baphokophelele ukukuchitha nazozonke izinto ozisebenzele kanzima. Uma uphupha ubona amagundane kuyinhlanhla kuphela uma emhlophe. Ngale kwalokho kusho ukuthi abantu bazokukhaphela.
Tags Amagundane, Amagundwane
Uma uphupha ubona inkawu kusho ukuthi kunabantu abazama ukukuphamba ngakho kufanele ulindele nanoma yini uma ufuna ukuphumelela.
Tags Izilwane, Izinkawu
Uma uphupha ubona uchakide kusho ukuthi umshado wakho uzoba sengxakini. Uma uchakide ephakamisa umsila wayo uma idlula ngakuwe uzoba neshwa.
Tags Izilwane, Ochakide
Uma uphupha ubona imvukuzane ukusebenza ngokuzikhandla kwakho ngeke kukuse ndawo okwamanje kodwa uma uphikelela uyoyibona imiphumela.
Tags Izilwane, Izimvukuzane
Uma uphupha ubona izingwe kusho ukuthi kunezikhathi ezinzima ekusaseni lakho futhi kuyofanele ubekezelele izikhathi ezinzima nokulahlekelwa.
Tags Izilwane, Izingwe
Uma uphupha ubona impungushe kusho ukuthi kufanele uqaphele ingozi. Uma uyibulalaimpungushe kodwa uyonqoba ezimpikiswaneni nasemibangweni yakho nabanye. Amaphupho ngezimpisi.
Tags Izilwane, Izimpungushe
Uma uphupha ubona izimpondo zesilwane kuwuphawu oluhle futhi kusho ukuthi uzoduma.
Uma uphupha ubona imvubu kufanele uqaphele esikhashaneni esilandelayo.
Tags Izilwane, Izimvubu